धुलिखेलमा किराती नाट्य विमर्श | Agni News Agni News
२०७५ फाल्गुन ७, मंगलबार , नेपाली समय : ०२:४२ pm
धुलिखेल (काभ्रे), ३० भदौ, पूर्वी नेपालका किरातहरुको नाट्य परम्परा, लोक नाटक, संस्कार, संस्कृतिजन्य अभिनयहरुको बारेमा आज मध्य नेपालको धुलिखेलमा विचार विमर्श गरिएको छ । सुम्निमा थिएटर एकेडेमीको आयोजना र नेपाल प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रको सहआयोजनामा 'किराती नाट्य विमर्श–२०७४' कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
वरिष्ठ भाषाविद् प्रा.डा. विष्णुसिंह राईको सभापतित्वमा भएको सो विमर्श कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नाटककार प्रवीण पुमाको ११ औँ पुस्तक कृति 'पारुसेवा मुन्दुमः परिचय, पाठ र विश्लेषण' को विमोचन गरिएको थियो । किराती संस्कारअनुसार केराको पातमा पोको पारेर ल्याइएको पुस्तकलाई भियना विश्वविद्यालय, साउथ एशियन स्टडिज विभागका प्रमुख प्रा.डा. मार्टिन ग्यान्सजेले विमोचन गरेका हुन् ।
सो कृतिमाथि वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठ 'रोदन'ले टिप्पणी गरेका थिए । पुस्तकको संक्षेपमा टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले किराती जातिको मुन्दुममा गहन खोज गरेर अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशमा ल्याएकोमा लेखक पुमालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । युवा पुस्ताहरु यसरी आफ्नो संस्कार र संस्कृतिप्रति गम्भीर भएको देख्दा खुसी लागेको बताउँदै श्रेष्ठले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण अब युवा पुस्ताले नै गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालको संस्कार र संस्कृति जोगाउन नेपालमा प्रचलित र लोपोन्मुख भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिनु पर्ने उल्लेख गरे । नेपालमै प्रचलनमा रहेका भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको विषयमा नेपालीलाई नै जानकारी नभएको वर्तमान अवस्थामा पुमाको कार्यले यसको प्रचार प्रसार र उन्नतीमा ठूलो योगदान पुगेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नाटककार प्रवीण पुमाको 'कोइँच लोकनाटकको अध्ययन' शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्रमा नाटककार पुमाले कोइँच जाति नेपालका आदिवासी र किरात धर्म मान्ने किरातीहरुको एक शाखा भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी वल्लो किरात (काठमाडौँ पूर्वदेखि दूधकोशीसम्म) मा बसोबास गर्ने कोइँचहरुको जनसंख्या ५५ हजार ७ सय १२ रहेको छ । कोइँचलाई सुनुवार, सुनवार, सुन्वार वा मुखिया पनि भनेर चिन्ने गरिएको छ ।
कोइँचहरुको नाटकको प्रारम्भ, मध्यान्ह र अन्त्य धार्मिक विधिबाटै प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ । कोइँचमा मुख्यगरी सापुरोलो, खामेउम्चा, ग्याँबे ताँगे, जाइलामे, बुल्नु थाःचा, शाँदार, कालिपिपि, बास्तिहोपो, मेसेल्मी, नादोरी, क्लिक्लिति, राम्दाले, शुदुक, क्योङमाचिङ, पोइबो, सलाक, खालो, थालो जस्ता नाटकहरु प्रचलनमा रहेको पनि पुमाले उल्लेख गरे । कोइँच जातिका मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्म, दैनिक कार्यहरु, धार्मिक तथा काल्पनिक विषयवस्तुमा अभिनय प्रदर्शन हुने भएकाले यो कार्यपत्रमा सोही कुरा उल्लेख गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे ।
नाटककार पुमाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि अनुसन्धाता तथा संस्कृतिविद् शीतल गिरी र प्रा.डा. सावित्री कक्षपतिले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गिरीले भाषाको जन्म हुनुभन्दा अघि अभिनयको जन्म भएकोले नाटक पहिलो र अन्यको जननी विधा भएको उल्लेख गरे । मानव उत्पतिबाट ढुङ्गे युग, पशुपालन युग हुँदै अहिलेको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा अभिनयले नै प्रमुखता पाइरहेको बताउँदै गिरीले एक किराती जातिको नाटक परम्परालाई यो कार्यपत्रले प्रमाणिकरण गरेको बताए ।
अर्का टिप्पणीकार प्रा.डा. सावित्री कक्षपतिले किराती नाटकलाई लिपिबद्ध गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइन् । यसैक्रममा नाटककार पुमाले कोइँच जातिको नाट्य परम्परालाई लिपिबद्ध गर्न सकेको उनको दाबी थियो । किरात जातिमा धेरै नाटकहरुको स्रोत रहेको बताउँदै उनले अहिले धेरै भन्दा धेरै नाटकको संकलन मात्रै गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । हाम्रो पुस्ताले ती विषयवस्तुहरुको संकलन मात्रै गर्न सके पनि सके यही पुस्ताले नसके अर्को पुस्ताले व्याख्या र प्रसार गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । किरात समुदायमा प्रचलित नाटकहरुलाई त्यही समुदायका युवाहरुले अध्ययन र संकलनमा चासो राख्नु पर्ने पनि उनले बताइन् ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रा.डा. मार्टिन ग्यान्जलेले किरात जाति संस्कार र संस्कृतिको धनि जाति रहेको बताउँदै यो जातिको विषयमा धेरै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले आफू विगत लामो समयदेखि यही जातिको विषयमा अध्ययन गरिरहेकोले संकलित सामग्रीलाई भियना युनिभर्सिटीमा अभिलेखिकरण गर्न सफल भएको बताए । युनिभर्सिटीमा संखुवासभाका मेवाहाङहरुको तथ्याङ्क संकलन भइसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय सत्यहाङ्मा पन्थ मान्ने किरातीहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रा.डा. प्रेम खत्रीले युनेस्को र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा किरातीहरुको अध्ययन र अनुसन्धानका कार्य गरिहेको बताए । किरात जातिमा प्रचलित नाटकको क्षेत्रमा पनि आफूले काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । किरातीहरुको नाट्य परम्परा र संस्कारलाई लिपिबद्ध गर्न आफूहरु निरन्तर लागिपरेको उनले सुनाए । मान्छेको क्रियाकलाप नै एक नाटक र अभिनय भएकोले अमूर्त सम्पदा अन्तर्गत अध्ययन र अनुसन्धान गरी लिपिवद्ध गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । समय र परिस्थितिले कुनै पनि जात जातिका व्यक्तिहरु फरक स्थानमा गए पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँगै लिएर गएको उल्लेख गर्दै खत्रीले नेपाली नाट्यकारिताको प्रचार प्रसार पनि भइरहेको बताए ।
खत्रीले प्रवीण पुमाले किरातीहरुको नाटक क्षेत्रमा पुस्तक प्रकाशन, नाटक लेखन, मञ्चन गरेर योगदान पुर्याउँदै आएकोले यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका सभापति प्रा.डा. विष्णुसिंह राईले प्रोफेसर डा. मार्टिनले किरातको मुन्धुम र अन्य संस्कार संस्कृतिको बारेमा भियना युनिभर्सिटीमा डिजिटल अर्काइभ बनाएर राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिए । त्यो अर्काइभको सम्पूर्ण पाठकहरुले युजर क्रिएट गरेर अध्ययन गर्न पाउने पनि उनले जानकारी दिए । नाटक साहित्यको एक विधा भए पनि अभिभाज्य रुपले साहित्यकै विधा भने भन्न नमिल्ने बताए । नाटक अभिव्यक्तिको एक माध्यम भएको बताउँदै उनले नाटकको लेख्य रुप भने पछि मात्रै आएको बताए ।
नाटककार प्रवीण पुमा एक समर्पित युवा भएकोले किरातीहरुको नाटक क्षेत्रमा शसक्त रुपमा लागिरहेको उनले उल्लेख गरे । पुमाले पहिचानको विषयमा दुखेसो पोखेको बताउँदै उनले पहिले त आफ्नो सम्पदाको संरक्षण गर्नु पर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन हुँदा पहिचान स्वतः प्राप्त हुने बताए । किरातीहरुको नाटक क्षेत्रमा अझै धेरै अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँदै राईले आफूले पनि पछिल्लो समय किरातीहरुको मृत्यु संस्कारको बारेमा आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रम धुलिखेलको इको रिसोर्टमा सम्पन्न भएको थियो । अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अनुसन्धाता डा. भक्त राईले संचालन गरेको कार्यक्रममा हङ्कङबाट आएका गीतकार टंक सम्बाहाम्फे, पत्रकारहरु डिल्लीरमण सुवेदी र प्रेम स्याङ्तान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।